Uwusebenzisa kanjani umatshini wokugaya irayisi we-paddy
Uwusebenzisa njani umatshini we-paddy huller kwaye yintoni ekufuneka siyiqwalasele?
Ukusebenza komatshini wokugaya irayisi kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkqubo yokulungisa irayisi. Ngoku, Makhe sithethe kakhulu ngomatshini wokugaya irayisi ngokubaluleka.Umatshini wokugaya ukutya osusa irayisi unokuyisusa ingqolowa kwaye ulicandelo elisisiseko ekugayeni irayisi.. Umbungu welayisi kunye ne-endosperm yelayisi yenziwa ngamagciwane. Kwaye emva kokugaya, kunganceda ukwahlula phakathi kwembungu yelayisi kunye ne-endosperm ukuze kuphuculwe ubuchule bokugaya degermination ukusebenza kakuhle. Ukuba siyayisusa i-rayisi yerayisi, sinokwenza isityalo sokugaya irayisi sivelise iigrasi zerayisi ngaphandle kwengcambu, inencasa engcono. Ngaphandle koko, Umgangatho wesityalo wokugaya irayisi uphuculwe.
Nxibelelana nathi malunga nendlela yokusebenzisa umatshini wokugaya irayisi we-paddy